जनकपुरमा देखिए सिके राउतका सुरक्षा गार्ड ! – नेपाली सूर्य
March 10, 2019 Nepali SuryaLeaveaComment on जनकपुरमा देखिए सिके राउतका सुरक्षा गार्ड !
२६ फागुन, जनकपुरधाम । मूलधारको राजनीतिमा आउने सहमति गरेर जनकपुर पुगेका सिके राउतको समर्थनमा स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले जनकपुरमा र्‍याली निकालेको छ ।
विमानस्थलमा उनलाई स्वागत गर्दै समर्थकहरुले र्‍याली निकालेका छन् । नेताहरुका अनुसार सिके राउतले जानकी मन्दिर पुगेर पूजापाठ गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको छ ।
स्वतन्त्र मधेशको झन्डाको प्रयोग
मास्क लगाएका सुरक्षा गार्ड
राउतको सुरक्षाका लागि भन्दै गार्ड समेत प्रयोग गरिएको छ । राउत विमानस्थलमा आइपुगनु अघि नै त्यहाँ पुगेका उनीहरुले बुलेट प्रुफ ज्याकेटसँगै मास्क लगाएका थिए । उनीहरुले टाउकोमा रातो कपडा र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको झण्डा बाँधिएको, आँखामा चश्मा लगाइएको र मास्कले मुख छोपेका छन् ।
उनीहरुले सिके राउतसँग प्रतिकृया लिन र फोटो खिच्न गएका पत्रकारहरुलाई समेत रोकेका थिए । उनीहरु कहाँबाट र किन ल्याइएका हुन् ? भन्ने कुरा खुलेको छैन ।
इथियोपियन एयरलाइन्सको बोइङ ७३७ विमान दुर्घटनाः १५७ जनाको मृत्यु
पितृको तस्बिर पूजा कोठामा कहिल्यै पनि नराख्नुहोस्, यस्तो संकट निम्त्याउछ
December 15, 2017 December 15, 2017 Nepali Surya